Cofttek Pamusoro pedu - Kudya kwekudya kunowedzera zvakasvibirira zvigadzirwa
Cofttek Kubata Limited
Cofttek Holding Limited inowanikwa muna2008, ibhizimusi repamusoro rekugadzira mishonga yekubatanidza kugadzirwa, R&D nekutengesa. Inowanikwa muLuohe Chemical Industry Park, yakazvipira kutsvagisa nekusimudzira kweindasitiri yemishonga yepamusoro, ichipa zvigadzirwa zvitsva uye nemhando yepamusoro masevhisi eindasitiri yemishonga.
Cofttek iri nepuratifomu yakasimba yebiotechnology, makemikari tekinoroji uye ongororo yekuongorora, inotarisa mukuvandudzwa kweAPI, pakati nepemakemikari akanaka, apo ichipa mhando yepamusoro CRO, CMO masevhisi uye yekuongororwa yekuedza uye hwemhando yekutsvakisisa masevhisi emakambani ari muindasitiri yebhizinesi.
Cofttek ine ruzivo manejimendi timu uye yekutanga-kirasi R&D timu, kusanganisira akawanda akatanhamara nyanzvi muminda yemishonga synthesis process kuvandudza uye mishonga yemhando yekutsvagisa. Inonyatso kuzivikanwa uye inokwikwidza yakakosha mune ino nzvimbo yemishonga chemistry, synthetic technology, drug drug kuvandudza, bioengineering, nezvimwe.Vatengi vekambani nevamwe vavanoshanda navo vanouya nepasirese, vachiumba kudyidzana kwakabatana nemakambani mazhinji emishonga muNorth America, Europe, India uye China.
Kusimbirira pamusimboti we "Hwaro Hwakanaka, Mutengi Chekutanga, Kutendeseka Sevhisi, Mutual Kubatsirwa", cofttek Holding Limited. inopa vatengi zvigadzirwa zvinogutsa kuburikidza nekuyedza kwakakwana uye yepamusoro-soro sevhisi.
Tsika synthesis uye chibvumirano R&D
Diki-rakakura & rakakura-kukura kugadzira
Maitiro R&D uye nzira itsva yekuvandudza
yepamusoro-tech yemishonga biochemical bhizinesi yekubatanidza kugadzirwa, R&D uye kutengesa.
Isu tine yepamusoro-soro marabhoritari nemidziyo, yepasi rose R & D timu uye manejimendi tsvimbo.